Tantara ny pesta: mandray an-tanana ny mpizahatany i Madagasikara
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia eto Madagasikara » Tantara ny pesta: mandray an-tanana ny mpizahatany i Madagasikara
Novambra 6, 2017
Misokatra ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany mankany Madagasikara. Pesta dia tantara.
Ny hafatra taorian'ny fivorian'ny krizy UNWTO tany London androany dia hoe: Misokatra indray ny Travel sy ny fizahan-tany mankany Madagascar. Pesta dia tantara. Vonona handray ny mpizahatany amin'ny tànana malalaka indray i Madagasikara. Andro fanamaivanana androany ho an'ny fizahan-tany eto Madagasikara sy i Roland Ratsiraka ao amin'ny tsenan'ny World Travel any London ankehitriny.
Ny Hon. Roland Ratsiraka, minisitry ny fizahantany ho an'ny firenena nosy ranomasimbe Indiana, dia nihetsika tamin'ny alàlan'ny olana goavana taorian'ny valanaretina pesta. Androany, nomen'ny minisitra mpiara-miasa sy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana, ary koa ny UNWTO, jiro maitso ho azy.
Manana harena hatolotra ny nosiny. Ny firenena dia fonenan'ny karazam-biby an'arivony, toy ny lemur, tsy hita na aiza na aiza, miampy ala mando, morontsiraka mahavariana, ary haran-dranomasina.
Hatramin'ny androany dia vonona handray ireo mpizahatany iraisam-pirenena i Madagasikara. Raha ny filazan'i Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana misahana ny fizahan-tany manerantany dia tsy misy atahorana intsony ny fitsidihan'ny mpitsidika io nosy nosy Indan tsara tarehy io.
Tamin'ny 7:00 hariva dia niady hevitra nandritra ny adiny 2 ny minisitra avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy toa an'i Maorisy, Seychelles, Maorisy ary Kenya ary nilaza tamin'ny eTN fa hisy fanambarana iraisana hivoaka vetivety.
Madagasikara dia mpikambana ao amin'ny Fikambanana fizahan-tany momba ny fizahantany ao Vanilla sy UNWTO.
Ny Hon. Nilaza tamin'ny eTN ny minisitra Roland Ratsiraka fa milamina ny fitsidihan'ny fireneny.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Taleb Rifai dia nitsidika an'i Madagasikara tato ho ato miaraka amin'ny delegasiona UNWTO avo lenta haneho ny fanohanany feno ny fikambanana amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny fizahantany eto Madagasikara dia niatrika toe-javatra sarotra taorian'ny valanaretina pesta izay nanosika ny firenena sasany hametra ny fameperana ny dia miaraka amin'i Madagascar. Notsiahivin'Andriamatoa Rifai fa ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia nanoro hevitra ny tsy fameperana ny fivezivezena na ny varotra mankany Madagasikara.
Nanazava i Rifai androany fa efa misy ny fomba fitsaboana maoderina eto Madagasikara. Ny maripanan'ny vatana isaky ny mpandeha fiaramanidina tonga na mivoaka dia alaina (mari-pana amin'ny hafanan'ny vatana no mety hahitana fa voan'ny virus).
Andriamatoa Ratsiraka nilaza tamin'ny eTN fa vita ny krizy. Hoy izy: "Ny ilain'izy ireo izao dia ny mpizahatany."
Maurice Loustau-Lalanne, minisitry ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo ary ranomasina ho an'ny Seychelles, dia nanambara fa andrasana hanohy ny serivisy eto Madagascar i Air Seychelles.
Ny Hon. Anil Kumarsingh Gayan, Ny minisitry ny fizahan-tany ho an'i Maorisy dia naneho ny fanohanany ary nilaza fa tsy misy fameperana intsony eo amin'ny fivezivezena miala na mankany Maurice mankany Madagasikara.
Fatuma Hirsi Mohamed, sekretera foibe, minisiteran'ny fizahantany any Kenya, dia tsy nety ihany koa ny hanome mazava tsara an'i Madagascar.
Misokatra amin'ny sehatry ny fizahantany i Madagasikara.
Madagasikara niaina valanaretina pesta lehibe nihatra tamin'ny tanàna lehibe sy ny faritra tsy misy endem-po hafa hatramin'ny Aogositra 2017
Maldives dia manambara tetik'asa fanovana toekarena vaovao vaovao mandritra ny WTM
Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba dia mamoaka ny fanavaozana an'i Karaiba taorian'ny rivodoza